Kismaayo News » Wafuudda iyo masnada Kismaayo loo kala bax
Wafuudda iyo masnada Kismaayo loo kala bax
Kn:Waftiga ka socday dawladda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku joogay Kismaayo ayaa maanta kulamo guud iyo kuwa gaar gaar ah oo ay la yeesheen bulshada rayadka ka bacdi waxay socdaal u kuurgal ah ku tageen goobo muhiim ah oo ay kamid tahay marsada caalamiga ah ee Kismaayo, Isbitaalka guud ee degmada, Jaamacadda Kismaayo iyo xarumo kale.
Waftiga ayaa lug ku qaaday jidka dheer ee gala dekedda, ayagoo neecawda badda ka soo dhacaysa sanka la raacaya isla markaana ku ildoogsanaaya hirarka gaalaa-baxaaya xeebta. Intay jidka ku sii jireen waxay hadba salaan ka qaadanayeen ciidamada amaanka iyo shaqaalah dekedda ee masnada ku sugan, kadibna waxay gaareen halka maraakiibtu ku soo xirtaan iyo halka laga maamulo dekedda. Maareeyaha dekedda ayaa uga warbixiyay xaaladda ay dekeddu ku sugantahay iyo cadadka shaqaalaha ka hawlgala.
Isbitaalka guud ayay sidoo kale ku soo booqdeen dhaawac yiilay, wasiirka gaashaandhigga ayaana dhaawaca gudoonsiiyay hadiyado lacag ah, waxaana loo sameeyay balanqaadyo ku aadan in xaaladdooda lala tacaalaayo, ayadoo goobtii loogu duceeyay inuu Ilaah u booga dhayo, ajarna ka siiyo dhiigooda ay u hureen badbaadinta dadkooda iyo dhulkooda.
Waftiga ayaa socodkooda ku soo gunaanaday Jaamacadda Kismaayo oo masaafo ka baxsan magaalada, saaranna taag bacaad ah eoo sheedda ka kulaalaaya biyaha badda. Jaamacadda waxay saldhig u tahay qaarkamid ah ergada iyo gudiga farsamada ee maamul u samaynta Jubbooyinka, waxaana halkaasi ka dhacay is gacan qaad iyo is xogwaraysi kooban, kadibna waxaa wafuudda loo hargaliyay goobtii sooryada, madal uu maamulka ku meel gaarka ah ee Kismaayo ugu talo galay wafuudda qaran.
Wafuudda ayaa sidoo kale caawana joogaaya, waxaana la filaayaa in bari ay dib ugu noqdaan Xamar. Warar ayna KismaayoNews xaqiijin ayaa sheegaaya in Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ama midkood uu soo gaaridoono Kismaayo todobadaadyada soo socda, si loo sii xoojiyo midnimada iyo wada shaqaynta.